ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲရှုံးပှဲအပွီးမှာ ဆားဘီးယားကစားသမားမြားကို ခရစ်စတီယာနိုရျောနယျဒို ဘာပွောခဲ့လဲ? – Play Maker Sports Journal
ယငျးနှငျ့ပတျသကျပွီးပျေါတူဂီနညျးပွဆနျတိုက “ပှဲပွီးသှားတဲ့အခါစိတျပကျြမှုကအရမျးကွီးမားပါတယျ။ပျေါတူဂီသာအောငျသှားရငျကစားသမားမြားနဲ့နညျးပွအဖှဲ့ဝငျတှဘေယျလိုဖွဈနမေလဲမှနျးကွညျ့လို့ရတယျ။ကစားသမားတှကေကှငျးထဲမှာရှိနတေုနျးကအားပေးနှဈသိမျ့ဖို့သှားခဲ့ပါတယျ။သူ(ရျောနယျဒို)ကဆားဘီးယားကစားသမားတဈဦးပွောနတောကွားလိုကျပါတယျ။ ‘တကယျလို့ငါသှငျးတဲ့ဂိုးသာငွငျးပယျမခံရဘူးဆိုရငျမငျးတို့ရယျနိုငျမှာမဟုတျဘူး။ငါပွောလညျးမငျးတို့အလေးအနကျထားမှာမဟုတျပါဘူး’လို့ပွောနခေဲ့ပါတယျ။
မတျလတုနျးကဆားဘီးယားတှငျကစားတဲ့ပှဲစဉျတှငျခရစ်စတီယာနိုရျောနယျဒိုဟာ၃-၂ဂိုးဖွငျ့အနိုငျရရှိမယျ့ဂိုးကိုသှငျးယူခဲ့ပါတယျ။ဒါပမေယျ့ဒိုငျလူကွီးကဘောလုံးကဂိုးစညျးကိုမကြျောဆိုပွီးဂိုးအဖွဈမပေးခဲ့ပါဘူး။ထိုစဉျကကှငျးမှာ VAR မရှိပါဘူး။တကယျလို့ယငျးဂိုးကိုသာခှငျ့ပွုခဲ့မယျဆိုပါကပျေါတူဂီမှာခွစေဈပှဲတိုကျရိုကျအောငျမွငျပါမယျ။
ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲရှုံးပွဲအပြီးမှာ ဆားဘီးယားကစားသမားများကို ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒို ဘာပြောခဲ့လဲ?
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးပေါ်တူဂီနည်းပြဆန်တိုက “ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါစိတ်ပျက်မှုကအရမ်းကြီးမားပါတယ်။ပေါ်တူဂီသာအောင်သွားရင်ကစားသမားများနဲ့နည်းပြအဖွဲ့ဝင်တွေဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲမှန်းကြည့်လို့ရတယ်။ကစားသမားတွေကကွင်းထဲမှာရှိနေတုန်းကအားပေးနှစ်သိမ့်ဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။သူ(ရော်နယ်ဒို)ကဆားဘီးယားကစားသမားတစ်ဦးပြောနေတာကြားလိုက်ပါတယ်။ ‘တကယ်လို့ငါသွင်းတဲ့ဂိုးသာငြင်းပယ်မခံရဘူးဆိုရင်မင်းတို့ရယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါပြောလည်းမင်းတို့အလေးအနက်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူး’လို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။
မတ်လတုန်းကဆားဘီးယားတွင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်တွင်ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဟာ၃-၂ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိမယ့်ဂိုးကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ဒိုင်လူကြီးကဘောလုံးကဂိုးစည်းကိုမကျော်ဆိုပြီးဂိုးအဖြစ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ထိုစဉ်ကကွင်းမှာ VAR မရှိပါဘူး။တကယ်လို့ယင်းဂိုးကိုသာခွင့်ပြုခဲ့မယ်ဆိုပါကပေါ်တူဂီမှာခြေစစ်ပွဲတိုက်ရိုက်အောင်မြင်ပါမယ်။
အာဖကနျမှာ အမြိုးသမီးဘောလုံးသမား ၁၃၀ ဦးတို့ ထှကျပွေးနိုငျအောငျ ကမျကာဒါရှီယနျ ကူညီပေးခဲ့